दुई मिनेटमै स्खलन हुन्छ, के यो कुनै यौन रोगको कारण हो? – Health Post Nepal
२०७८ कार्तिक ६ गते १८:४६
प्रश्न – मैले १७ वर्षको उमेरदेखि हस्तमैथुन गर्न थालेको हुँ। अहिले २६ वर्षको भएँ। जब म आफ्नो गर्लफ्रेण्डसँग यौनसम्पर्क गर्न सुरु गर्छु २ मिनेटमै स्खलन हुन्छ। के मलाई कुनै यौन रोग छ? मैले के गर्दा ठीक होला?
जवाफ – तपाईंको सिघ्रपतन हुनुमा हस्तमैथुनको कुनै सम्बन्ध छैन। पहिले त तपाईंले आफ्नो सहनशक्तिमा सुधार गर्नुपर्यो। व्यायाम गर्नुस्, खानेकुरामा ध्यान दिनुस्। यसका अलावा तपाईंले आफ्नो पेल्भिक फ्लोरको मांशपेशीलाई बलियो बनाउन किगल व्यायाम गर्नसक्नुहुन्छ।
खासगरि सिघ्रपतनका चार कारण हुन्छन्-
१ यौनसम्बन्ध बनाउँदा पुरुषमा आवश्यकताभन्दा बढी जोस आउनु
२ लिंगको अगाडिको भाग धेरै संवेदनशील हुनु
३ प्रोस्टेटमा इन्फेक्सन हुनु
४ डायबिटिजको सुरुवात
-यदी उत्तेजना धेरै हुन्छ भने ड्यापोक्सिटेन को ६० मिलिग्राम औधषी यौनसम्पर्क राख्नु एक घण्टाअघि लिन सक्नुहुन्छ। यसको असर ४ घण्टासम्म रहन्छ।
-यदि लिंगको अगाडिको भाग बढी संवेदनशील छ भने त्यसलाई कम गर्नका लागि xylocain z% मलम लगाउन सक्नुहुन्छ। यौनसम्पर्क राख्नु १० मिनेटअघि लिंगको अघिल्लो भागमा लगाउँदा यसले संवेदनशीलतालाई केही कम गर्छ। तर, यौनसम्पर्क राख्ने बेलामा भने लिंगलाई पानीले सफा गर्नुस्।
-यदी तपाईंमा प्रोस्टेटमा इन्फेक्सन छ भने पनि सिघ्रपतन हुनसक्छ। पिसाब गर्दा पोल्छ वा दुख्छ भने तपाईंमा इन्फेक्सनको समस्या हुनसक्छ। यसका लागि एन्टिबायोटिक्स औषधी लिनुपर्ने हुन्छ।
-यदी तपाईंमा डायबिटिज बढी छ भने त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुस्। यो तपाईंको सेक्सुअल लाइफका लागि मात्र नभएर पर्सनल लाइफका लागि पनि आवश्यक छ।
यो समस्याबाट छुटकार पाउन फोरप्लेमा बढी समय बिताउनुस्। बढीभन्दा बढी ध्यान स्वस्थकर तथा तागतिला खानेकुरा र व्यायाममा दिनुस्। किगल एक्सरसाइज गर्नुस्। यसले तपाईंको पेल्भिक फ्लोरको मांशपेशीलाई बलियो बनाउनुका साथै सिघ्रपतन तथा नपुंसकताको समस्यालाई पनि समाधान गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै बज्रोली र अश्विनी योगाभ्यास पनि गर्नसक्नु हुन्छ।